Oge ezumike nke oke ezumike pụrụ iche | Akụkọ Njem
La honiimuunu bụ oge dị ezigbo mkpa maka di na nwunye ahụ ndị na-enwe ọ stageụ na agba izizi ha dịka di na nwunye. Ọ bụ ya mere njem ezumike nke di honi nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịmalite ndụ ọhụrụ ahụ. E nwere ọtụtụ di na nwunye na-ahọrọ ụgbọ mmiri na-atọ ụtọ, ebe ọ nwere ọtụtụ uru.
Un honiimuunu irughari Ọ bụ nnukwu echiche ma anyị ga-agwa gị ihe kpatara ya. Na mgbakwunye na ịnye gị ụfọdụ echiche banyere ị ga - agagharị ma ọ bụ ngwugwu ndị ụlọ ọrụ na - ebubata ụgbọ mmiri na - enyekarị, nke emebere maka ndị lụrụ di na nwunye. Getlụ di ma ọ bụ nwunye nwekwara ike inye anyị ụfọdụ uru ma a bịa n’ịchụ ego maka njem ndị a dị egwu.
1 Nkasi obi na ntinye akwukwo
2 Akụkụ nha anya udo na ọrụ
3 Nleta dịgasị iche iche
4 Njem zuru ezu
5 Agbamakwụkwọ na alụ nwanyị ọhụrụ
Nkasi obi na ntinye akwukwo
Ọ bụrụ na e nwere ihe nwere ike ịbụ nnukwu uru mgbe ọ na-abịa ego a honiimuunu njem, ọ bụ mfe idetu na ihe niile na-ama zubere. E nwere ọtụtụ ndị di na nwunye na-eji ogologo oge eme atụmatụ njem. N'oge a enwere nchegbu ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ị ga-eme atụmatụ agbamakwụkwọ yana nkọwa ya niile, yabụ ezumike nke ezumike nwere ike ịbụ ihe dị mfe. Dika nwunye na nwunye na aga ndi njem. N'ihe banyere njem, naanị ị ga-akwụ ya ụgwọ ma lelee nkọwa anya n'ihi na ọ bụ ihe dịlarị ụbọchị ya emebere ya na mmemme ya na nkwụsị ya, ihe na-enye nkasi obi dị ukwuu nye ndị na-ahọrọ ụdị njem a. Ihe dị mfe mgbe ịnwe njem a na-eme atụmatụ nwere ike ịbụ otu n'ime uru ndị na-eme ka anyị họrọ ụdị echiche a maka ezumike nke ezumike.
Akụkụ nha anya udo na ọrụ
Mgbe anyị na-eme atụmatụ njem gaa ebe dị iche iche, anyị nwere ike ịnọ ogologo oge na ọdụ ụgbọ elu, na-eje ije ma na-esi n'otu ebe gaa ebe ọzọ. Nke a na-agwụ ike, n'ihi ya, ọ dịghị oge ọ bụla ga-eji nụ ụtọ ọhụụ ọhụrụ a. Ọ bụ ya mere njem njem bụ nnukwu ụzọ ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ nwere ọtụtụ ọrụ, nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ nwere ike ịnụ ụtọ ya oge izu ike na obi iru ala sunbathing mgbe ị na-elele oké osimiri na mmiri.
Mgbe nwunye na nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ gwụrụ ịnọ na loungers, ha nwere ike mgbe niile isonyere ụfọdụ ọtụtụ ọrụ ndị na-abụkarị n'ụgbọ nke ụgbọ mmiri. Ha nwere ụlọ ahịa, ụlọ nri, ụlọ mmanya, ebe spa, egwuregwu dịka akara zip, mgbatị ahụ na ogologo wdg. Ọ ga-abụ di na nwunye ahụ ga-agbanye ọgwụ dịka ihe ha si chọọ oge ọrụ na nke ezumike.
Nleta dịgasị iche iche
Ihe dị mma gbasara njem bụ na ha na-ekpori ndụ ka anyị na-esi n'otu ebe aga ebe ọzọ, ọ bụghị dịka ụgbọ elu. Ọ bụ ya mere ha ji nọrọ jụụ ma zuru oke maka ndị na-alụ nwanyị ọhụrụ. ọ ga-ekwe omume họrọ ụgbọ mmiri nwere ụzọ dị iche iche na nkwụsị. Enwere ụgbọ mmiri gaa Caribbean, mpaghara Mediterenian, Greek Islands, Northern Europe ma ọ bụ Galapagos. Dabere na ihe anyị chọrọ ịhụ, anyị nwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ. N'ime ụzọ ọ bụla enwere ọtụtụ ụgbọ mmiri na-enye nkwụsị dị iche iche, ebe ọ bụ na ha niile anaghị anọ otu ụbọchị. Ọnụ ego ahụ dịgasị iche dabere na steeti a họọrọ, ọnụahịa nke ime ụlọ ime ime ahụ dị ala yana oke ụlọ ma ọ bụ ụlọ nwere mbara ihu dị elu.
Njem zuru ezu
Cruises zuru oke maka ịghaghachi batrị gị na ihe kachasị mma bụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka ịkwadebe njem ma ọ bụ nleta. A na-eme atụmatụ ihe niile ma ụgbọ mmiri ahụ na-ahapụ nwanyị na nwanyị na-alụ nwanyị na isi ebe na obodo iji hụ ebe ndị a niile. Na otu ụgbọ mmiri ị nwere ike nweta ịhụ obodo ise ma ọ bụ isii na isi nke mmasị, ihe na njem ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ elu ga-abụ onye nzuzu, ọkachasị n'ihi ebe a na-akwagharị na oge ọ ga-ewe iji mee ya. Ọ bụ ya mere ndị a ji bụrụ njem zuru oke nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ ebe dị iche iche anyị nwere na ndepụta nke ebe anyị ga-ahụ. Nkasi obi ọ na-enye n'oge njem ahụ bụ isi ike ya ịhọrọ ya karịa ụdị njem ndị ọzọ na ezumike.
Agbamakwụkwọ na alụ nwanyị ọhụrụ
Na ụlọ ọrụ ọ bụla ha na-enyekarị ngwugwu pụrụ iche maka nwanyị na nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ, yana ụfọdụ uru. Ngwunye ndị a gụnyere ọrụ dịka ịhịa aka n'ahụ di na nwunye ahụ, oge spa, nri ụtụtụ na akwa na nkọwa dị ka karama champeenu mgbe ha rutere. N’ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri a, ha chọrọ ka di na nwunye weta akwụkwọ alụmdi na nwunye iji gosi na ha nọ na ezumike ha. Typesdị ọnọdụ ndị a na otu esi eme usoro a nwere ike ịjụ ndị ọrụ njem. Ọ dị mkpa ịkọwapụta ụdị ihe ndị a iji nwee ike ịnweta uru nke honiimuunu n'ụgbọ mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Honeymoon irughari